लकडाउनमा माेबाइलमा समय बिताइरहनुभएकाे छ ? यसले के के हुन्छ थाहा छ ? « LiveMandu
१८ बैशाख २०७८, शनिबार २३:१०
लकडाउन भएपछि सबै मानिसकाे एउटै काम भएकाे हुनसक्छ माेबाइल चलाउने बस्ने । तर माेबाइलमा धेरै समय बिताउँदा धेरै समस्याहरू निम्तन सक्छन् । यसकाबारे हामीले बिचार गर्नुपर्ने देखिएकाे विज्ञहरू बताउँछन् । लकडाउनले हाम्राे जीवनशैली परिवर्तन गरिदिने भएकाले हामीले सकेसम्म माेबाइलमा समय बिताउन कम गर्नुपर्ने देखिएकाे छ । माेबाइलमा धेरै समय बिताउँदा धेरै जिज्ञासा र खाेजहरू हराएर जाने डर त छँदैछ यसले स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर गर्ने हुनसक्छ । तसर्थ माेबाइलमा बिताउने समय सकेसम्म कटाैती गर्नु हित छ । माेबाइल चलाउँदा हुने समस्याहरूला यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ हेराैं ।
निद्रा नलाग्ने समस्या निम्त्याउँछ ।
राति ९ बजेपछि स्मार्टफोन चलाउने वा स्मार्टफोन मार्फत काम गर्ने व्यक्तिको निद्रा निकै कमजोर हुन्छ। स्मार्ट फोनमा लामो समयसम्म बस्दा हाम्रो दिमाग एकोहोरिने र दिमागले पर्याप्त मात्रामा मेलाटोनिन हर्मन (यसले निदाउन सहयोग गर्छ)उत्पादन गर्न नसक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। मेलाटिनिन उत्पादनमा बाधा पुगेपछि हामी पर्याप्त सुत्न सक्दैनौँ।
यौन क्षमतामा कमी ल्याउन सक्छ ।
जीवनशैली पनि बर्बाद हुने सम्भावना हुन्छ ।
दुर्घटना बढ्ने खतरा पनि धेरै हुन्छ ।
मानसिक समस्या पनि बढ्ने हुन्छ ।